🥇 ▷ Google Fit: Sidee ayuu u tartamayaa weyn ee HealthKit ee Apple? ✅
Google Fit: Sidee ayuu u tartamayaa weyn ee HealthKit ee Apple?
Dagaalka cusub ee u dhexeeya Google iyo Apple wuxuu aadayaa goobta caafimaadka
Iyada oo inbadan oo ka mid ah ogeysiisyadii ugu dambeeyay ee Apple, sida HealthKit, waxaan arki karnaa in wiilasha Cupertino ay dano gaar ah ka leeyihiin caafimaadka isticmaaleyaasha, iyo dabcan, imaatinka iWatch ee soo socda waa xaqiijinta tan. Dhanka kale, sidoo kale macquul ahaan Google ma rabto inay ka baxsato meheraddan, waana sababtaas sababta ay dhowaan ugu soo bandhigtay nidaamkeeda gaarka ah ee wanaagsanaanta shakhsiyadeed, Google Fit, oo aan waxbadan ka ogaan doonno si qoto dheer hoos.
Sidee Google Fit?
Sidii aannu nidhi, ka dib muuqaalka kore ee HealthKit ee Apple, midka qaada dhammaan shucladaha toddobaadkan waa nidaamka daryeelka caafimaadka ee isticmaaleyaasha uu soo bandhigay mashiinka raadinta caanka ah, oo loogu magac daray Google Fit. Mabda ‘ahaan, waa inaan dhahnaa inkasta oo faahfaahinta hawlgalkiisa ay weli ahaato in la ogaado, waxay noqon doontaa xarun xogta ku xiran Aqoonsigeenna Google, kaas oo qaadi doona dhammaan xogta xaaladaha maalinlaha ah ee la xiriira caafimaadka iyo fayoobaanta jirka, marka lagu daro waxqabadka ciyaaraha.
Mar alla markii la soo aruuriyo xogtan oo dhan, waxaa markaa kadib loo gudbin doonaa adeegsadayaasha laftooda aaladda ay soo saareen qaybaha saddexaad, halkaas oo aan awood ugu yeelan doonno inaan u burburinno falanqaynta. Waxyaabahaas ka mid ah alaabooyinka ka caawin doona Google Fit, waxaan xusi karnaa saacadaha smart ee aadka loo filayo, laakiin sidoo kale kuwa kale sida garka, biraha, iyo xitaa caqli ahaan kuwa casriga ah.
Arrin kale oo umuuqda mid aad u xiiso badan oo kusaabsan Google Fit ayaa laxiriirta xaqiiqda ah in isla waqtigaas uu shaqada bilaabo, waxaa adeegsan kara shirkadaha isboortiga sida Adidas ama Nike, si magacooda dhowr. Aaladaha dharka lagu xirto sida caanka ah Nike Fuelband ayaa fududeyn doonta xogta iyada oo loo marayo Google Fit, taas oo shaki la’aan ka dhigaysa mid xiiseeya isboorti badan inay eegaan suurtagalnimada isticmaalka.
Waxyaabaha aan la ogayn ee weli la xallin doono ee ku saabsan Fit
Sikastaba, wali waxaa jira faahfaahino laxiriira Google Fit oo aan wali u cadeyn dadka isticmaala. Waxaa ka mid ah waxaan ka xusi karnaa goorta aan arki karno codsiyada ugu horreeya ee la xiriira madalkan. Runtii, waxaa la filayaa inay weli bilooyin ka hadhsan yihiin sidii looga marqaati furi lahaa aaladda barnaamijyo la jaan qaada Google Fit, iyo suuq xawli ku socda taas oo ah waxoogaa niyad jab ah.
Waxaa intaa dheer, waxa cad in labada Apple As Google ay mar horeba si buuxda ugu hawlan tahay qaybta caafimaadka ee isticmaaleyaasha, iyo in horumar kasta oo mid ka mid ah ay la socon doonto jawaab isku mid ah ama mid ka sii badan oo dhinaca kale ah. Xitaa Microsoft waxay sidoo kale ka shaqeyneysaa marxaladaha ugu dambeeya ee saacaddeeda smart, shaki la’aan, waa tartan aan u baahan nahay inaan tixgelinno iWatch iyo kuwa badan oo leh Android Wear.